Ma u baahan tahay caawimaad? – Integrationsnätverk Göteborg
Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på somaliska from NCK on Vimeo.
Ma ku aragtaa xoog wax ku muquuninta dadka xiriirka dhow leh?
Rabshaddu waxay noqon kartaa:
Halkan waxaa ah lambarro aad ku wici karto taageero iyo caawin.
Xarunta dhibaatooyinka ee dumarka: 031-3679380
Xarunta xasaradda ee haweenka waxay adiga iyo carruurtaada ku siineysaa guryo go’an iyo wicitaanno taageero ah
Khadka Xoriyadda Haweenka: 020-505050
Khadka xorriyadda haweenka waa taleefan taageero loogu talagalay kuwa loo geystay rabshado. Telefoonku wuxuu furan yahay 24ka saacadood maalintii.
Hay’adaha Haweenka ADA Tel: 031-131166
Safarada haweenka iyo gabdhaha ee Ada waxay ku yaalliin Göteborg waxayna ka shaqeeyaan inay siiyaan taageero iyo badbaadin haweenka, gabdhaha iyo caruurta u nugul rabshadaha. Waxay kale oo ay maamulaan hoy gabaad leh.
Ururka haweenka ee Lexfemme, wuxuu ku hadlaa luqado badan: 020-220050
Lex Femme waxay leedahay teleefonka aad u wici karto si aad uga hesho talo iyo taageero iyo caawimaad xagga sharciga ah. LexFemme waxaa loogu talagalay haweenka asal ahaan ka soo jeedo waxayna ku siisaa caawinaad afkaaga hooyo.
Diiwaanada Kiiska Dembiga: 0200212019
Taageerada Dhibbaneyaasha Dambi waxay siisaa taageero dhammaan dhibbanayaasha. Khasab kuguma aha in booliisku ay soo sheegaan dembiga si aad taageero u hesho.
Wac 114 14 haddii aad rabto inaad la xiriirto booliiska si aad u soo sheegto dembi. Wac 112 si aad ugu wargaliso booliiska haddii ay jirto xaalad degdeg ah.
Haddii ay jirto xaalad degdeg ah, wac SOS Alarm